Factorylọ ọrụ China C02 USB C Jack Ada Ada na ndi nnabata | Huachuang Elektrọnik
Aha Ngwaahịa: 2 NA 1 USB-C Isi okwu / Earphone Audio Ada Ada
Nlele NO: C02
N'ọdụ ụgbọ mmiri: USB-C Iji USB-C + 3.5mm Jack
Ogologo eriri: 100 mm
Ibu ibu: 8 g
Size: 35 * 15 * 8 mm
1, Biko Mara: Ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba ihe ịkwesịrị ịge egwu na ngere n'otu oge.
2, Ndakọrịta: Ezubere maka ọtụtụ ngwaọrụ USB-C na 3.5mm. Gụnyere Google Pixel 4/4 XL / 3 / 3XL, Samsung Galaxy S10 / S9, Cheta 10, iPad Pro 11 / 12.9 2018 & 2020.
3, Nchaji: Iji chajụọ ngwaọrụ gị jikọtara USB-C Digital anyị Ada Ada site n'iji eriri USB-C chachie na chaja mgbidi USB-C.
4, Hi-Fi Quality Music: Wuru na dijitalụ-ana-analog Ihe Ntụgharị (DAC) na-egosipụta njiri mara mma nke Hi-Fi nke dakọtara yana ọrụ nkwanye ugwu dịka Tidal na Spotify Premium. Igwe nwere olu dị elu (24-bit / 96 kHz) na ihe nrịba ama Class G.
5, Enwere ike idozi plọg mpụta n'azụ fuselage ahụ, jiri nlezianya dozie ma dozie eriri ahụ, ọ bụghị ọgbaghara, kama ijikwa njikwa na iji ngwa mpụga;
6, nwere ike imeziwanye ike ala akwụkwọ ndenye akwụkwọ ọkụ, welie mgbasa ikuku, agaghị ebufe oke ọkụ na desktọọpụ, si otú a belata iji nkasi obi, n'otu oge ahụ, ọ nwere ike ichebe ihe dị n'ime nke akwụkwọ ndetu site na kpochapu oke ma na-ebute mbibi;
7. be ga-enwekwu arụ ọrụ. N'ime ọfịs ahụ, jikọta eriri ethernet, eriri ike, eriri igwe na-ebi akwụkwọ, òké, wdg. Na ọdụ ụgbọ mmiri ma ọ bụ na-arụ ọrụ n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ, ma tinye igwe ahụ na ya mgbe ị na-eji, mgbe ị na-apụ, igodo nwere ike ikewapụ igwe na onye na-enye ọdụ ụgbọ mmiri. na ọdụ ụgbọ mmiri, nke kachasị adaba
Nke gara aga: Igwefoto Ekwentị Jack-2 USB-C na ntinye, na USB-C ruo 3.5mm Ada Ada maka ekweisi, ekweisi.
Osote: 5 IN 1 USB-C Ada Ada na HDMII, 100 W PD, VGA, USB3.0,3.5mm Jack
Ihe nkwụnye isi
Cdị C Iji nkwụnye ntị
USB C Iji 3.5mm Ada Ada
USB C Iji ekwenti Jack
USB-C Audio Ada Ada
Ada USB USB-ada ada
Ihe nkwụnye USB USB-C USB-C na Chargi…